Baolina kitra :: Rava ny nofinofin’ny Barea handeha amin’ny CHAN 2020 • AoRaha
Baolina kitra Rava ny nofinofin’ny Barea handeha amin’ny CHAN 2020
Nangoron’entana ny Barea. Nifarana tamin’ny sabotsy lasa teo, tany Namibia, ny dian’ny ekipam-pirenena malagasy an’ny baolina kitra na ny Barea amin’ny fikatsahana ny tapakila handray anjara amin’ny fiadiana ny ho tompon­dakan’i Afrika na ny CHAN 2020. Tafavoaka mpandresy tany amin’ny taniny ireo Namibiana rehefa nisaraka tamin’ny isa 2 noho 0 ny lalao miverina tamin’ireo mpilalao malagasy.
Nifarana teo amin’ny dingana fifanintsanana, araka izany, ny lalaon’ny Barea noho ny nandresen’i Namibia azy tamin’ny isa 2 noho 1 rehefa natambatra ny vokatra nandritra ny lalao mandroso (Madagasikara-Namibia: 1 – 0) sy ny lalao miverina (Namibia – Madagasikara: 2 – 0).
Miverina ny endrika ratsy
Lasa indray ilay endrika tsara napetraky ny Barea nandritra an’iny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019, tany Ejipta lasa teo. Nanaporofo izy ireo fa maha­vita zavatra tsara ireo mpilalao malagasy. Miverina amin’ny nahitana ny endriky ny Barea, hatramin’izay, nanomboka tamin’ny Lalaon’ny Nosy 2019, tany Maorisy lasa teo. Mbola lavitra ny lalana tokony hodiavin’ny ekipam-pirenena malagasy, indrindra ireo mpilalao avy eto an-toerana.
Nanao izay tratry ny heriny ihany anefa izy ireo na dia teo aza ilay fahaizan’ireo Nambiana, izay nitarika tamin’ny isa 1 noho 0 tamin’ ny fizaràm-potoana voalohany. Mbola noporofoin’ny ekipa nifanandrina tamin’ny Barea ihany nandritra ny dimy amby efapolo minitra faharoa fa matanjaka ary ambony haavo teknika noho izy ireo i Namibia. “Nanao izay vitany hatramin’ny farany ireo mpilalao malagasy na dia teo aza ny tsy fifantohana kely teny anelanelan’ny lalao. Miarahaba azy ireo sy ny delegasiona rehetra mihitsy aho noho ny lalana nodiaviny nandritra an’iny dingana fifa­nintsanana iny. Mbola tsy taty amintsika aloha ny vintana tamin’ity indray mitoraka ity”, hoy i Nicolas Dupuis, tale teknika nasionalin’ny Fede­rasiona malagasin’ny baolina kitra, niaraka tamin’ny delegasiona tany Namibia.
Hain-trano teny Anosibe :: Nitsinjo an’ireo tra-boina ny kandidà Andriantsitohaina Naina
Fanorenana fotodrafitrasa :: Tsy hihemotra manoloana an’ireo sakantsakana atao aminy Rajoelina Andry